”Maxaannu yeelnaa?!” – Sweden & Finland oo markii ugu horreeysey si heer sare uga shiray ku biirista NATO (Maxaa ka jira inay Juun ku biirayaan?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Maxaannu yeelnaa?!” – Sweden & Finland oo markii ugu horreeysey si heer...
”Maxaannu yeelnaa?!” – Sweden & Finland oo markii ugu horreeysey si heer sare uga shiray ku biirista NATO (Maxaa ka jira inay Juun ku biirayaan?)
(Stockholm) 14 Abriil 2022 – Raiisel Wasaaraha, Finland Sanna Marin iyo dhigeeda Sweden, Magdalena Andersson, ayaa ka wada niqaashay dalabka laga yaabo in dalalkoodu ay u gudbiyaan NATO kaddib wadahadal laba geesood ah oo ku saabsan amniga oo ka dhacay Stockholm.
Go’aanka Helsinki ee ku saabsan in la codsado ku biirista gaashaanbuurta millateriga ah ee Maraykanku hoggaamiyo iyo in kale “wuxuu ku dhici doonaa si degdeg ah,” ayay tiri Marin oo ka hadlaysey shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen. “Waxay ku dhici doontaa toddobaadyo gudohood e, ma aha bilo.” ayay raacisay.
Finland, si la mid ah Isweden, waxa ay waddey siyaasad ah in aann lagu biirin isbahaysi millateri oo dhexdhexaad la ahaado, laakiin “wax walba way is beddeleen” kaddib markii uu Ruushku billaabay weerarka millateri ee Ukraine, ayay tilmaantay.
Marin waxa ay sheegtay in ay doonayso in madlaha siyaasadeed ee Finland is afgarad looga gaaro ka mid ahaanshiyaha NATO. “Dhammaan kooxaha baarlamaanka iyo sidoo kale Madaxweynaha ayaa fursad u heli doona inay go’aana arrintan ka gaaraan toddobaadyada soo socda,” ayay sharraxday, iyadoo raacisay in mudanayaashu ay horta dhagaysan doonaan khubaro xagga amniga ah oo badan oo arrintan ka tala bixiya.
RW Andersson ayaa iyana sheegtay in Sweden aysan ku degdegi doonin go’aanka ay kula biirayso NATO, balse waxa ay ballanqaaday in si dhab ah oo qoto dheer loo qiimeeyn doono xaalada amaanka.
“Waa waqti muhiim u ah taariikhda,” ayay tiri, iyada oo tixraacaysa dhacdooyinka Ukraine. “Muuqaalka ammaanku gabi ahaanba wuu is beddelay haatan. Waa inaan ka fikirnaa waxa u wanaagsan Sweden, amnigeeda iyo nabadeeda,” ayay raacisay Ra’iisul Wasaaraha Sweden oo hadlaysa.
Horraantii Arbacadii, wargayska Swedish-ka ah ee Dagbladet ayaa daabacay in hadafka Andersson uu yahay inay codsiga ku biiritaanka NATO ay soo gudbiso bishan Juun. Si kastaba ha ahaatee, Ra’iisul Wasaaraha ayaa diiddey in ay xaqiijiso warkaas mar ay saxafiyiintu wax ka waydiiyeen.
Isniintii, wargayska Times ee Britain ayaa isna qoray, isagoo soo xiganaya saraakiil Maraykan ah, in codsiga Finland ee NATO la filayo bisha Juun, iyadoo Sweden ay raacayso wax yar kaddib.
Ruushka, Finland iyo Sweden ayaa dhamaantood wadaa marin-biyoodka Badda Baaltigga, iyadoo Ruushka iyo Finland ay wadaagaan xuduud dhuleed jiidan ilaa 1,340km, waloow aysan Sweden la lahayn xuduud wax dhuleed ah.
Previous articleKASHIFAAD: Maraykanka oo ”jilbaha qabsaday Imaaraadka” & kulan la qariyey oo dhacay
Next articleDalal ay qaarkood Somalia isku fiican yihiin oo wada arrimo xadgudub ku ah dalkeenna (Arag caddayntan)